कोरोनाको त्रासमा मन्त्रीज्यूको घरमा ‘पाहुना’ ! | ImageKhabar <!-instant articles-->
कोरोनाको त्रासमा मन्त्रीज्यूको घरमा ‘पाहुना’ !
कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोपलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ‘विश्वव्यापी महामारी’ घोषणा गरेको छ । चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसबाट विश्वभरी झन्डै २ लाख मानिस संक्रमित हुनुका साथै आठ हजार बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यद्यपी, खुला सिमाना भएपनि चीन र भारत दुबै मुलुकमा यो भाइरसको संक्रमित देखिए पनि नेपालमा अहिलसम्म यसको संक्रमण देखिएको छैन । तर अहिले यो भुल्नु हुन्नकी विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि उच्च जोखिममा रहेको ठहर गरिसकेको छ । सोही कारण अहिले नै आवश्यक पूर्व तयारी नगरे पशुपतिनाथको आशिर्वादले मात्र यो भाइरसले नछुनेवाला छैन ।
अहिले नै मुखमा लगाउने माक्स र हात सफा गर्ने स्यानिटाइजर नपाएर जनता भौतारिएका छन् । संक्रमण हुन नदिन भ्रमण वर्ष र नेपाल आउने पर्यटक आगमनमा कडाई गरिएको छ । तर त्यती मात्र पर्याप्त छैन । अन्य तयारीबारे प्रश्न गर्दा सरकारका जिम्मेवार स्वास्थ्य मन्त्रीले दिएको ‘घरमा पाउना छन् अहिले बोल्दिन’ भन्ने जवाफ त सामाजिक संजालमा भाइरल नै छ । मानिसहरु त्रासमा छन् । यो अवस्थामा मन्त्रीले अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गरेर नागरिकलाई सकरात्मक उर्जा प्रदान गर्नुपर्नेमा यस्तो जवाफ दिनु कति उचित छ ?
त्रासमा रहेका नागरिकलाई सचेत नबनाउने हो भने वुहान जस्तै काठमाडौं वा अन्य कुनै शहर नलड्कराउला भन्ने अवस्था आउदैन । त्यो अवस्थामा सरकारले के गर्छ । इटालीको जस्तै अवस्था नेपालमा नआउला भन्नेमा ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन् । चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण इटालीमा जनवरी २९ मा पहिलो पटक देखिएको थियो । त्यसबेला दुई चिनियाँ पर्यटकलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । इटालीका नियामकले उनीहरुलाई तत्कालै क्वारेन्टाइनमा राख्यो ।
तर कोरोनाको थप संक्रमण देखिन थाल्यो । सरकारले केही प्रभावित क्षेत्रलाई रेड जोन घोषणा गर्दै मानिसहरुलाई सचेत गरायो । तर कोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या बढ्दै गयो । नयाँ संक्रमितको संख्या बढेसँगै एक चौथाइ मुलुकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गर्यो । यो निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको सूचना चुहिएपछि रेड जोनमा रहेका धेरै मानिसहरु भाइरस नफैलिएको भन्दै आआफ्नो घर फर्किए । त्यसपछि ह्वात्तै इटालीमा बिरामीको संख्या बढ्यो । नेपालको सन्दर्भमा पनि काठमाडौं, पोखरा जस्ता शहरमा ग्रामीण भेगबाट आएका मनिसहरुको बसोबास उच्च छ । त्यस कारण अहिलदेखि नै सचेतना नअपनाउने हो भने भोलि यस्तै दुर्दशा भोग्नुपर्ने हुनपनि सक्छ ।
त्यसर्थ सरकारले अहिले नै क्यावरेन्टाइन निर्माण गर्ने, अतिरित्त स्वास्थ्य चौकीहरुको व्यवस्था गर्ने र दैनिक सयौं नागरिकलाई परीक्षण गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ । केही दिनमै अतिरिक्त अस्पताल निर्माण गर्ने क्षमता हामीसँग छ ? अरु कुरा छाडौं एक लाख नागरिकलाई क्वारेन्टलाइनमा राख्न परे त्यसको व्यवस्था कहिले गर्ने ? त्यो अवस्थामा खाद्यन्न, औषधीलगायतका अत्यावश्यक बस्तुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसको व्यवस्थापनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ? कि अहिलेकै जस्तो निधारमा थर्मोमिटर टस्याएर सेल्फक्वारेन्टाइमा बस भन्ने ?
उसै त अहिले मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य लाभमा हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा उहाँको उतिसारो सक्रियताको अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । त्यही बीचमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको जस्तो गैरजिम्मेवार जवाफले जनतालाई थप त्रसित बनाएको छ । आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नुपर्छ । सरकारले केही गर्दैन भन्ने भान पर्न गएको छ । नआतिएर सुरक्षा उपायाहरु अपनाउ केही भोली केही भएमा संक्रमण फैलन नदिन सरकार पूरा तयारीमा छ । संक्रमतिलाई यो स्थानमा अस्पताल, यो स्थानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । अन्यलाई खाद्यन्नलगायतका अत्यावश्यक बस्तुको भण्डार छ । किन भन्न नसकेको ?
सेना, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालनको रणनीति सरकारले बनाउनुपर्यो । चीन, जापाना, अमेरिकालगायतका मुलुकमा कोरोना विरुद्ध लड्न अनेक अभ्यास भइरहेका छन् । ति राम्रा अभ्यासलाई अबलम्न गर्नुपर्यो । जसले गर्दा सकेसम्म भाइरस नेपालभित्र् नै नपाओस् । यो संकटको घडीमा सरकार अझ त्यसमा पनि जिम्मेवार मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय महत्वको विषयमा आउने दबाव सामाना गर्न झिजो मान्नु हुँदैन । मध्यरातमा सम्म खट्ने र खटाउने असाधारण क्षमता उनले देखाउनुपर्छ । उनले सोच्नुपर्छ मैंले अहिले गरेको राम्रो कामको नतिजा राम्रै हुन्छ । तर सरकार र मन्त्री ढकालका क्रियाकलाप ठिक विपरित छ । प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय हुननसक्ने यो अवस्थामा संयमित, दुरदर्शी, धैर्यता र सचेतना अपनाउन उनलाई नागरिकको तर्फबाट आग्रह छ ।
हजारौं स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई खटाउनपर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले दुई जना पाउना देखाए जस्तै भोलि खटिएको व्यक्तिले त्यस्तै गैरजिम्मेवारी काम गर्यो भने के गर्ने ? अर्को कुरा नागरिकले पनि सकेसम्म कम मानिसहरूको बीचमा रहने, भीडभाडले संक्रमण नहोस् भन्नका लागि विवाह, व्रतबन्ध, भेटघाट, सभा, सम्मेलन सबै रोक्नु भनेको सकेसम्म यसलाई पालना गर्नुपर्छ । अर्थात होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । तर केही मन्त्रीको यस्तै गैरजिम्मेवार जवाफले सरकारले गरेका सयौं राम्रो कामलाई गुम्राहमा पारिदिन्छ र सरकारप्रतिको नागरिक भसोसा क्रमशः स्खलित हुँदै जान्छ । त्यसो हुँदा सबैले समयमा धैर्यता अपनाई, जिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत हुनु अहिलेको अपरिहार्यता हो । (बञ्जारा–नेपाल विद्यार्थी संघका नेता हुन् )